ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Barnes နှင့် Nobles သို့မသွားပါ။ | Martech Zone
သူတို့ကတစ် ဦး တည်ဆောက်ခဲ့သည် Barnes နှင့် Nobles ငါ့အိမ်နဲ့မိုင်အနည်းငယ်အကွာမှာရှိပြီးအဲဒါကတကယ်ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့စတိုးဆိုင်တစ်ခုပါ။ ငါအမြဲတမ်းခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိပုံရတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေ။ နယ်ခြားမဲ့ သူတို့ရဲ့စင်ပေါ်ကိုစုစည်းဖို့ပိုပြီးကနျ့နည်းလမ်းရှိသည်ပုံရသည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စတိုးဆိုင်နှစ်ခုလုံးကိုငါတကယ်နှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် AT&T နဲ့ကြိုးမဲ့စနစ်ရှိတဲ့ Starbucks ကသူတို့မှာ Barnes and Nobles မှာငါမကြာခဏတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ငါခဏတာမှာနယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များများမရောက်ခဲ့ဖူးဘူး - T-Mobile အပြင်သူတို့မှာ T-Mobile မှတဆင့် ၀ င်ရောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် - ငါပါ စာအုပ်စင် နှင့် Barnes နှင့် Nobles ထံမှ (နှင့်။ ) အမေဇုံ) သို့သော်ယနေ့နယ်နိမိတ်ကိုနယ်ခြားမဲ့များသာသတိရနေကြသည်။
Borders သည်ဤကဲ့သို့သောကောင်းမွန်သောအီးမေးလ်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ကူပွန်ကို ၂၅% လျှော့ချရန်အချိန်ယူခဲ့ခြင်းသည်အလွန်အေးလွန်း။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူမေ့သွားမည်မဟုတ်ပါ အသံကအသံထွက်နေသည် နယ်နိမိတ်များမှာ Barnes နှင့် Nobles တို့၏စစ်ပွဲများကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည် - ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေတဲ့နေရာကလွဲရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါသေချာမသိဘူး။
စကားမစပ်, ငါယနေ့ 4-0 ကြီးတွေပါ! Woohoo!
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စာရင်းစစ်မိုဃ်းတိမ်ကိုcloud computingမိုးတိမ်သမိုင်းအသင်းအဆောက်အအုံ
ဝီလျံ "Papa" Meloney
ဧပြီ 19, 2008 မှာ 8: 12 AM
hoppy ငှက်နေ့ချစ်လှစွာသော Doug
ဧပြီ 19, 2008 မှာ 9: 07 AM
မင်္ဂလာမွေးနေ့ Doug ။
ဧပြီ 19, 2008 မှာ 3: 37 pm တွင်
(၃၉ နှစ်အရွယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်)
ဧပြီ 19, 2008 မှာ 8: 38 pm တွင်
ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့။ Doug ။
ဧပြီ 20, 2008 မှာ 8: 35 AM
ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့! ခဏကြာပြီ ... ကော်ဖီသောက်မိလိုက်ပြီ!
ဧပြီ 20, 2008 မှာ 10: 04 AM
မင်္ဂလာမွေးနေ့ Doug ... မင်းငါ့ကိုငါဖမ်းလိုက်တယ် (ဒါပေမယ့်ငါစက်တင်ဘာလမှာလက်လှမ်းမီတော့မယ်) ။ 🙂
ဧပြီ 20, 2008 မှာ 4: 54 pm တွင်
ဧပြီ 21, 2008 မှာ 7: 18 AM
မင်္ဂလာမွေးနေ့ကိုတူးဖော်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်မွေးနေ့ကိုမွေးခဲ့သည်
ဧပြီ 21, 2008 မှာ 7: 46 AM
ဧပြီ 22, 2008 မှာ 12: 36 AM
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ Doug! မင်းအာဏာပိုရမယ်
မေလ 9, 2008 မှာ 6: 43 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့နှင့်ပျော်ရွှင်စရာ irthday Kartenlegen တို့အတွက်ပါ